आज असार १५, यसरि मनाइँदै छ धान दिवस | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १५ असार २०७६, आईतवार ०७:३६ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिनाको सुरुवात अर्थात् असार १५ गतेका दिन नेपालभर धान दिवस, रोपाइँ यात्रा आदि नामले मनाइँदै छ। कृषिप्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिसको पेसा खेतीपाती हो । किसान वर्ष भरका लागि छाक जुटाउन यो महिनामा खेतीमा व्यस्त हुन्छन्। आजका दिन असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपुछुपु हिलोमा धान रोपिन्छ।
‘छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला’ जस्ता लोक लयका गीत गाएर खेतमै रमाइलो पनि गरिन्छ। मध्यगर्मीको यो समयमा युवा लाठे र युवती रोपाहारले खेतका गराको हिलो छ्यापाछ्याप गरेर मनोरञ्जन गर्छन। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही-चिउरा खान्छन्। यसबेला दही-चिउराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ।
असार १५ लाई नेपाली समाजमा दही-चिउरा खाने पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ। खेतीपातीबाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही-चिउरा खाई असार १५ मनाउँछन् । हाम्रो संस्कृतिमा दहीको स्थान महत्वपूर्ण छ। शुभकार्यका लागि घर बाहिर निस्कने, विदेश जाने आदि महत्वपूर्ण काम गर्नुअघि दही अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा छ। यस्ता शुभकाममा निस्कनुअघि सगुनका रुपमा पनि दही खुवाएर बिदाइ गरिन्छ।
दही खुवाएर बिदा गरे शुभ प्राप्त हुने सांस्कृतिक मान्यता छ । दही वैज्ञानिक दृष्टिले पनि स्वास्थ्य वर्द्धक मानिन्छ गुरु गोरखनाथले नेपालको एकीकरण कर्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई दही खान दिएर पराक्रमी हुने भविष्यवाणी गरेका थिए भनिन्छ। आयुर्वेदमा भोजनको अन्त्यमा दही मथेर बनाएको मोही पिएमा औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीकोमा जानु नपर्ने बताइएको छ। दहीले पाचन शक्ति पनि बढाउँछ।
पखाला लागेका बेला दही-चिउरा खाएमा औषधिको काम गर्छ। यसैले दही-चिउरा खाने संस्कारले नेपाली संस्कृतिमा बृहत् रुप लिएको छ। यसरी असार १५ नेपाली समाजमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व बन्न सफल भएको छ। असार १५ का दिन आज गाउँ ठाउँका हुने खानेले बेठी लगाएर धान रोपाइँ गर्छन्। यसरी धान रोपाइँ गरे खेतबाट सह बसी मनग्य उत्पादन हुने विश्वास रहेको छ। रासस
मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन’ अर्थात् आज असार १५। कृषकहरुले काम गर्दै दही-चिउरा खाएर मनाउने यो दिन गैरकृषकका लागि भने ‘खाने पर्व’का विकसित हुँदै गएको छ।
सांस्कृतिक महत्व बोकेको दहीचिउरा स्वास्थ्य दृष्टिकोणले कस्तो छ? कसले खाँदा फाइदा हुन्छ? कसरी खाँदा स्वास्थ्यलाई लाभ पुग्छ? यीलगायतका विषयमा पोषणविद् सोफिया उप्रेतीसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश उनकै शब्दमाः
चिउरा कार्बोहाइड्रेडको स्रोत हो। दहीमा चिउरा मिसाएर खाँदा कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, क्याल्सियम, पोटासियम र भिटामिन पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही कारण धेरै काम गर्ने दिन अर्थात् असार १५ मा दहीचिउरा खाने प्रचलन चलेको हुनुपर्छ।
असार १५ मा गर्मी पनि बढेको हुन्छ। गर्मीमा धान रोप्दा पसिनाको माध्यमबाट जाने पानीलाई समेत यसले परिपूर्ति गर्ने भएकाले दहीचिउरा खाने चलन बसाएको हुनुपर्छ हाम्रा पुर्खाहरुले। दहीचिउरा चाँडो तयार पार्न सकिने मिठो र पोषिलो खाजा भएकाले पनि कामको चाप भएका बेलाको खाना वा खाजाका रुपमा यसलाई रोजिएको हुनुपर्छ।
दहीचिउरा खान असार १५ लाई नै कुर्नुपर्छ भन्न छैन। अरुबेला पनि दहीचिउरा खाँदा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यो जुनसुकै उमेर समूहले पनि खान सक्छौं। जुन बेला पनि खान सकिन्छ।
हुन्छ त शैलुङ कन्सट्रक्सनलाई कारबाही ?
काठमाडाैं । सरकारले ‘क’ वर्गको शैलुङ कन्सट्रक्सनलाई कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सङ्केत देखाएको छ । विभिन्न ठाउँमा ठेक्का लिने तर…
स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सहमति नलिने प्रस्ताव
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहको सहमति लिनु नपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव…
काठमाडौँ । के तपाईंका बालबालिका मोबाइलमा गेम खेल्ने, टिकटक बनाउने या भिडियो हेर्ने गर्छन् ? यस्तो धेरै मात्रामा गरे…
एजेन्सी । हामी कहिले काहीँ आफैले राखेको बस्तु बिर्सेर हैरान बन्छौं । पछुताउँनु सिवाय विकल्प हामीसँग हुँदै । हामी…
वर्षेनी २ अर्बभन्दा बढीको श्रृङ्गार सामग्री भित्रिन्छ नेपालमा
काठमाडौं । हिन्दु महिलाहरुका लागि विशेष मानिने साउन महिना सुरु भएसँगै श्रृङ्गार सामग्रीको ब्यापारले बजार तातेको छ । प्रेम,…
रातारात भृकुमण्डपका पसल बन्द
काठमाडाै। गएको सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप हाताभित्रको फनपार्क रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड…
‘नेपाली पोर्न स्टार’ अर्चना पनेरुका श्रीमान अश्लिल क्रियाकलाप गरेको आरोपमा पक्राउ !5views